Phuza bese Ushayela | Inkampani Yomthetho Eklonyelisiwe
Kungaba nezizathu eziningi zezingozi ezenzeka emigwaqweni esukela emigwaqweni emibi iye kwizimo zezulu ezimbi. Kodwa-ke, ukushayela ungaphansi kwethonya lotshwala noma ezinye izidakamizwa kuyimbangela ejwayelekile yezingozi engavinjelwa kalula ngokusebenzisa ukuzithiba okuncane.
ithonya lotshwala noma ezinye izidakamizwa
imbangela ejwayelekile yezingozi
Uma kwenzeka uzithola usesimweni esinjalo, kufanele uqashe ummeli wokushayela ephuzile e-Dubai ukugwema ikusasa elibi kakhulu.
Ukubekezelelwa kwe-Zero ukushayela okuphuzile e-UAE
Kwi-UAE, ukushayela ngaphansi kwethonya lezinto ezidakisayo ezifana notshwala noma ezinye izidakamizwa kuyicala ngoba kunenqubomgomo yokungabekezeleli ngokuphelele. Eqinisweni, ngisho nokuphuza esidlangalaleni kubhekwa njengengekho emthethweni.
Ngakho-ke, umshushisi womphakathi angafaka icala kumshayeli ophuzile noma ngabe izinga lokuphuza elitholakele emzimbeni alithandeki. Imithetho enjalo eqinile iyasetshenziselwa ukunciphisa izinga lezingozi zokushayela ezidakayo minyaka yonke.
Eqinisweni, abantu abahileleka ezingozini zokushayela bephuzile bakhetha ukuphuza nokushayela ngisho nangemva kokwazi ngemiphumela abangase bahlupheke ngayo kanye nomonakalo ongase ubangele. Ngakho-ke, uhulumeni akazimisele ngabashayeli abadakiwe.
Ungayithola kanjani ilayisensi yotshwala eDubai
Ungathola ilayisensi yotshwala eDubai awuyena umSulumane. Kodwa-ke, kufanele uhlangabezane nemibandela elandelayo:
Kufanele ube ngaphezu kweminyaka engama-21 ubudala
Kufanele uthole iholo elincane lanyanga zonke le-Dh 3,000
Kufanele ube ne-visa yokuhlala
Akumele ube ngumSulumane
Ungawathola amafomu ezicelo kuMaritime kanye neMercantile International noma ama-webhusayithi wesitolo sotshwala ase-Afrika noma uthole amakhophi aqinile ezitolo. Ngaphandle kokugcwalisa ifomu, kumele kungeniswe lemibhalo elandelayo:
Ikhophi lepasipoti, inkontileka yokuqashwa, i-visa yokuhlala
Izithombe zesayizi yepasipoti
Imali ekhokhwayo ye-Dh 270 noma okusebenzayo ngesikhathi sokulethwa
Ikhophi lenkontileka yabasebenzi ekhishwe wumnyango ngesiNgisi nangesi-Arabhu
Endabeni yemibhangqwana eshadile, yindoda kuphela evumayo ukufaka isicelo ngaphandle kokuthi inkosikazi ithole i-NOC kumyeni wayo. Abantu abazisebenzelayo kufanele futhi balethe ikhophi yelayisense labo lokuhweba. Ukuthola ilayisense enkampanini yakho, umqashi kanye nomfakisicelo kumele basayine futhi banciphise isicelo. Imvamisa, isicelo besizocutshungulwa ngaphansi kwamasonto amabili.
Yini inhlawulo yokuphuza nokushayela eDubai?
Inhlawulo yokuphuza nokushayela eDubai ingadonsa inhlawulo ephakathi kwe-AED 5,000 kuya ku-AED 50,000, ukuboshwa phakathi kwezinyanga ezi-1 nezintathu, noma zombili. Ngaphezu kwalokho, ilayisense lakho lokushayela lingahlehliswa noma lisuswe iminyaka emibili. Ungaze ulahlekelwe ngumsebenzi wakho ngokuya nge-Article 3 yoMthetho Wezabasebenzi wase-UAE.
Phuza bese ushayela isijeziso
Ngokuya ngobungozi bengozi, umuntu ohileleke engozini yokushayela edakiwe angathola imiphumela emibi futhi alimaze nomsebenzi wakhe. Ukuphela kwendlela yokunciphisa umonakalo ukufuna usizo lochwepheshe. Ummeli wengozi yokushayela ephuzile angakusindisa uma ingozi akuyona iphutha lakho futhi abambe abanye abathintekayo ababambe iqhaza ngokuqondile noma ngokungaqondile ukuphambukise ukusola okuncane ukukuvikela.
Singakunika yonke imihlahlandlela nezeluleko ezidingekayo
Ama-solicitors ethu atholakala amahora angama-24 ngosuku, izinsuku eziyisikhombisa ngesonto ukukusiza ecaleni lakho.